जेठ १, २०७५ | शिक्षक टिम
कक्षा ७ को ‘सामाजिक अध्ययन’ मा गम्भीर त्रुटि
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘आधारभ ू त शिक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा ६–८) २०६९’ मा उल्लेख भएको कक्षा ७ को सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा विषयमा विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम अन्तर्गत ‘हामी र हराम्रो समाज ’ भन्ने पहिलो एकाइमा विकास का पूर्वाधारका रूपमा ‘यातायात र सञ्चार’ भन्ने विषय समावेश गरिएको छ । यही पाठ्यक्रमलाई आधार मानेर पाठ्यपुस्तकको विकास , लेखन तथा परिमार्जन गर्ने गरिन्छ । तर यसै केन्द्रद्वारा प्रथम संस्करण २०७१ देखि पुनर्मुद्रण २०७४ सम्म प्रकाशित हुँदा समेत कक्षा ७ को सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा विषयको पाठ्यपुस्तकमा भने यातायात र सञ्चार भन्ने पाठ्य विषयवस्तु समावेश गरिएको छैन ।
मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकलाई मात्र आधार मानेर सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने गरिन्छ । प्रायः विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम नराख्ने र भए पनि शिक्षकहरूले त्यो नहेर्ने कारणले गर्दा उक्त विषयवस्तु पढाइनबाट छुट्ने गरेको देखिन्छ ।
पुस्तकको चौथो संस्करण आउँदा समेत यस्तो त्रुटि नसच्याउनु पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कमजोरी रहेको देखिन्छ । यसले के संकेत गर्द छ भने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी गरिने प्रायः छलफल ,गोष्ठी, कार्यशाला आदि बालुवामा पानी सरह हुने गरेका छन्
राम सुनुवार शारदा मावि, पुवामझुवा, बेतेनी, इलाम
पाठ् यक्रम र पाठ्यपु स्तक दु वै अध्ययन गरे र त्यसमा भएका कमी–कमजा े री औं ल्याई सुधारको निम्ति घच्घच्याउनु भएको मा यहाँ लाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । कक्षा ७ को सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या विषयको पाठ् यक्रममा ‘हामी र हराम्रो समाज ’ भन्ने पहिलो एकाइको विषयवस्त ु को क्षे त्र र क्रम अन्तर्ग त यातायात र संचार भन्ने विषयवस्त ु पाठको रूपमा विकास भई समावेश नभएको कु रा सही हो । आगामी संस्करण (२०७६) मा यस सम्बन्धी पाठ विकास गरी समावेश गर्ने कु रा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
विष्णु माया सापको टा पाठ्यक्रम अधिक ृ त, पाठ्यक्रम विकास को न्द्र
मैले स्नातक तह उत्तीर्णपछि माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षण लाइसेन्स लिएको छु । साथै,यसरी बुझनुस्ग्रेडको हिसाब म २०६१ वैशाखमा प्रावि तृतीय श्रेणीमा स्थायी भै २०६९ फागुनमा बढुवा भएर प्रावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत स्थायी शिक्षक हुँ । हाल २०७४ मसान्तसम्म मैले २ग्रेड मात्र खाइरहेको छु । तर २०६३ सालमा प्रावि तृतीय श्रेणीमा स्थायी भै २०७४ साल मंसीरमा बढुवा भएर प्रावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरूले ३ग्रेड खाइरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा २०६९ सालमा बढुवा भई हाल प्रावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत म र मजस्ता शिक्षकहरू अन्यायमा परेनन् र ? हामीले पाउने वास्तविकग्रेड कति होला ?
टेकराज पौड्याल प्रगति मावि, कञ्चन–१, बेलभरिया, रुपन्देही
२०६१ व ै शाखमा नियु क्त भएका शिक्षकले २०६३ व ै शाख देखि ग ्रे ड प्राप्त गर्न थाल्छन् । त्यस्ता शिक्षकको २०६३ दे खि २०६९ सम्म ७ग ्रे ड हुन्छ । ७ग्रे डलाई रु.११० लेगु णा गर्दा रु.७७० हुन्छ । त्यतिबेलाको परावि तृ तीय श्रेणीको तबल स्क े ल भने को रु.१३,६५० हो । त्यो तलब स्क े लमाग ्रे ड जो ड्दा जम्मा रु.१४,४२० हुन्छ । जबकि त्यतिबेलाको द्वितीय श्रेणीको तलब स्क े ल रु.१४,४८० थियो । त्यसकारण त ृ तीय श्रेणीका शिक्षकले खाई पाई आएको तबल भन्दा द्वितीय श्रेणीको तलब स्क े ल धे रै भएको हो । यसले गर्दा समायो जनग ्रे ड आएन । २०६९ मा बढ ु वा भएको शिक्षकको माथिल्लोग ्रे ड २०७१ वै शाखबाट श ुरू हुन्छ । यस हिसाबले उहाँ हरूको २०७१ सालमा १ग ्रे ड, २०७२ मा १ग ्रे ड र २०७३ असार मासन्तसम्म १ग्रे ड गरी जम्मा ३ग ्रे ड हुन्छ । ३ग ्रेडलाई रु.२४० लेगु णा गर्दा रु.७२० हुन आउ ँ छ । २०७३ साउन १ देखि नयाँ दरकोग ्रे ड लागू भएको ले रु.७२० लाई रु.७८३ ले भाग गर्दा ०.९१ हुन आउ ँ छ । यस हिसाबले तपाईं को २०७३ साउन देखि १ग ्रे ड, २०७४ देखि २ग्रे ड र २०७५ देखि ३ग ्रे ड हुन्छ । यसलाई रु.७८३ लेगु णा गर्दा रु.२,३४९ हुन आउँ छ ।
२०६३ मा नियु क्ति भएर २०७४ मा बढु वा भएका शिक्षककोग्रे ड हिसाब गर्दा २०६५ देखि २०७१ सम्म ७ग ्रे ड आउ ँ छ । २०७१ सालमाग ्रे ड समायो जन हुँ दा तपाईं कोग्रे ड ४ हुन आउ ँ छ । २०७२ मा ५ग ्रे ड र २०७३ असारसम्म ६ग ्रे ड हु न आउ ँ छ । ६ग्रे डलाई रु.२२० लेगु णा गर्दा रु.१,३२० हुन आउँ छ । यसलाई २०७३ साउनबाट लागू भएको नयाँग ्रे डदर रु.७३९ ले १३२० लाई भाग गर्दा १.७८ हुन आउ ँ छ । यो भने को २ग्रे ड हो । २०७४ व ै शाखबाट १ग ्रे ड थपिएपछि रु.७८३ को दरले हो इन ।
नेपाल सरकारले शिक्षकहरूको तलबमान कायम गर्दा द्वितीय र त ृ तीय श्रेणीबीचको अन्तर जुन छ, त्यो एकै हिसाबले भएको छै न । जस्त ैः २०६२ सालमा रु.९६० को दरले अन्तर देखिन्छ भने २०६४ सालमा रु.१,२१० को अन्तर छ । त्यसै गरी २०६६ सालमा रु.६६० को अन्तर छ भने २०६८ सालमा आएर रु.८३० को फरक छ । यसै गरी २०७० सालमा रु.९८० को दरले फरक छ भने २०७१ मा आएर रु.१,०७० को अन्तर छ भने हाल रु.१,३३० को फरक छ । त्यही भएर पहिला बढ ु वा हुने को कम र पछि बढ ु वा हुने कोग्रे ड बढी हुन आएको ह
रवीन्द ्र बु ढापि ्र थी उपनि र्दे शक, शिक्षक किताबखाना
ग्रे ड रग ्रे ड संख्या सम्बन्धमा गएका पा ँ च/सात वर्ष दे खि नै शिक्षक मासिकका हरेकजसो अङ्कमा प्र श्न र उत्तरहरू छापि ं दै आएका छन् ।ग ्रे ड सम्बन्धी आफ्नो जिज्ञासा नितान्त नयाँ र मा ै लिक हो कि हो इन भन्ने यकिन गरेर मात्र हामीलाई पठाउने गर्नु हो ला ।
शिक्षक मासिकका प ु राना अङ्कहरूको संकलन हाम्राे वे बसाइट धधध।तभबअजभच।यचन।लउ मा गएर अभिले खमा सहज ै फे ला पार्न सकिन्छ । – सम्पादक
स्नातकोत्तर तह र एकवर्षे बी.एड. उत्तीर्ण गरिसकेको छु । शिक्षक सेवा आयोग पास गरी निमावि तहमा स्थायी सेवामा कार्यरत छु । अब म मावि तह, कक्षा ११–१२ मा समेत अध्यापन गर्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउँछु कि पाउँदिनँ ? यदि पाउँदिनँ भने, थप कस्तो योग्यता हासिल गर्नु पर्दछ ?
राजीव श्रेष्ठ श्री शुक्ला मावि, रिषिङ–१, तनहुँ
कक्षा १० सम्मको शिक्षण लाइसे न्स सम्बन्धमा शिक्षा ए े नामा व्यवस्था छ । हाल उच्च मावि शिक्षा ए े न खारेज भएको ले कक्षा ११–१२ का लागिको गर्ने भन्ने स्पष्ट कानू नी व्यवस्था छ ै न । त्यसकारण यस सम्बन्धी कानू नी व्यवस्था नभएसम्म तपाईं को जिज्ञासामा यसै हुन्छ भने र अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छ ै न ।
डा. तु लसी थपलिया सहसचिव, शिक्षक से वा आयोग
कक्षा १२ सम्मकै लागि हो
मिति २०७४/१२/२१ गते शिक्षा विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिइएको निर्देशनमा शिक्षकहरूको नियुक्ति अर्को आदेश नभएसम्मका लागि न गर्न भनिएको रहेछ । त्यो निर्देशनले उच्च माविका कोटामा पनि शिक्षक नियुक्ति गर्न रोकेको हो
रामवरण यादव श्री मावि कुम्हरौल रमदैया भवाडी, धनुषा
विभागको त्यो निर्दे शन पूर्व प्राथमिक शिक्षादे खि कक्षा १२ सम्मक ै लागि हो । ज्ञाने न्द्र वन, उपनि र्दे शक, शिक्षा विभाग
क) अध्यापन अनुमतिपत्र बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र संकायबाट अंग्रेजी विषयमा (सन् २०१४ मा) स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको छु । शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउँछु कि पाउँदिनँ ? वा अध्यापन अनुमति पत्र बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
ख) शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिक तहको लागि किन विज्ञापन खोल्दैन ?
शिक्षक सेवा आयोगले वि.सं. २०६९ को विज्ञापनमा प्राथमिक तहको समेत विज्ञापन खोलेको थियो र त्यसपछि खुलेका विज्ञापनमा प्राथमिक तहको विज्ञापन किन नखुलेको होला ? के आधारभूत तह भनेर छुट्टै खुल्छ कि प्राथमिक तह भनेर खुल्छ ?
पल्लवराज जोशी लेकम–५, मैखोली पनालीखेत, दार्चुला
क) शिक्षा ए े न २०१८ को दफा ११ को (ड) ६ (क) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनु मतिपत्रको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था छ । तर सा े ऐ न अनु सार नियमावली नबनिसक े को ले हालसम्म परीक्षा संचालन नै नभएको जानकारीगराइन्छ ।
ख) विद्यालय शिक्षा से वाकोगठन भई सो अनु सार शिक्षा विभागबाट मात्र आकृ ति फारम पराप्त भएपछि सा े ही आधारमा आयोगले विज्ञापन गर्ने हो । आयोग आफ ैं ले निर्ण य गर्ने विषय हो इन । क ु न तहको विज्ञापन गर्ने भन्ने विषय आयोगले नभई प्र चलित कानू न बमोजिम हुने छ ।